Imidlalo / Izicelo / I-Craft ngamandla ye-WEB / IoT Development - Shiya ukuba ukuphuhliswa kwemidlalo, izicelo, inkqubo ye-WEB, uphuhliso lwe-IO kunye nokusebenza!
Inkqubo yeWEB / isicelo / uphuhliso lweeOT
Inkxaso yesingeniso yeVR · Inkonzo yokuvelisa umxholo
フ ェ イ ス ブ ッ ク (esemthethweni)
Ulwazi olufutshane kwiMighty Craft
[Inkcazelo yokukhupha] I-Real Real Mahjong P8 ikhutshwe
Sithumele isicelo sokudluliselwa kwefeksi
Julayi 10, 2018
Siza kukuxhasa ukuxhuma kwiseva yokuhlalisa engayixhasi i-TLS 1.2
Meyi 30, 2018
Inyoka ye Dragon Dragon Shogi Online (Inkonzo ehambelana nexesha elizayo) iya kugqitywa
Yona umsebenzi weMighty Craft
U phuhliso lweMidlalo
Ukususela kwizicelo ze-smartphone (i-iPhone / i-Android), imidlalo yemidlalo kunye nemidlalo yabathengi, nceda uhlale uqhubeka kuquka ukucwangciswa kweprojekthi, iziseko zeseva, ukuphuhliswa kwesicelo, ukuphathwa kwemicimbi. Sinikela ngenkqubo esemgangathweni kwiprogram yesakhelo sethu seselula. Siphinde sinikele imidlalo kumasebe emisebenzi engaphandle kwamanye amazwe, nceda uqhagamshelane nathi ukuze sifumaneke kwilizwe ngalinye.
Ifowuni kunye neSombululo seWebhu
Sinikela ngenkonzo enye yokucwangcisa ukucwangciswa ~ ukuvelisa ~ ukusetyenziswa ~ ukuhlaziywa ~ siza kuphendula kwisantya sempendulo kwimveliso yangaphakathi kwendawo kunye nokuveliswa kunye nokusebenza ngokuhambelana kwendawo ehambelana nesiphakeli sefu. Siphepha irekodi yeendawo ezininzi ze-smartphone, izicelo ze-HTML, ukuphuhlisa imidlalo ye-SNS, ukwakha isayithi ye-PC, ukwakha ifu kunye nokusebenza.Siyakwazi ukulawula ukulungiswa komthwalo, uphando lophando / impendulo, ukufuduswa kweseva njl. Nceda ubuze njengomlingane wakho kwinkampani ngeendlela zonke.Siye siphumelele kakhulu kwi-web application yesicelo seshishini!
Siza kuphakamisa indalo ye-VR, ukuveliswa kwe-VR yoononongo inkqubo, njl.
Ukusuka kwi-MightyCraft efanelekileyo kumdlalo wezenhlalakahle, uphawu olutsha olujoliswe kwisicelo esiqhelekileyo, i-application demonstration application iyavela! Ukuba kubonakala kukuthakazelisa kunye neendlela ezincinci ziza kubumba! Njengendawo yokufumana iteknoloji enamandla "Craft Power" ngokholo, ndiya kuqhubeka ndikhulula kwi "studio studio" kwikamva!
Siza kuzisa ezinye iimveliso zethu. Kukho izicelo ezingaphezulu kwama-400 zezicelo kunye neendawo ezingaphezu kwama-50 kwiistim zewebhu.
Igosa elikhweleyo lokulwa
Ukukhusela iVR Library
Ibhulogi yobungcali beC Craft
Yenza ibhobho kwiNgxoxo (1) - webhook nge php
Ungasebenzisa i-webhook kwi-Chatwork API / Ukuba unobumba webhook ungayikhetha kwiNgxoxo / Ukusebenzisa i-webhook Ukuguqulwa kwangaphambili / Qinisekisa idatha ethunyelwe yiwebhuhook nge-PHP[...]
Ukunciphisa ukuhamba kweeFle kwiSapporo kunye ne-DS-Lite (IPv6 IPoE)
Kwiofisi yaseSapporo, i-NTT yefayili ye-fiber line ye-FLET yokunciphisa ijubane yinkinga. Uhlobo lwe-FLET'S uhlobo lwendawo yokuhlala eyi-100 Mbps. Ngomhla akukhathazeki kakhulu, kodwa ukunciphisa isantya emva kobusuku ngumsebenzi kuxhomekeke kumhla[...]
Hlaziya isahlulelo seLinux (umgca womyalelo)
Umthamo wesiganeko wamva usanda kuphakama, kunokuba ixabiso eliphantsi. Xa kuthelekiswa nokugcinwa kweseva kunye nememori yemininzi emininzi edlulileyo, ixabiso liphindwe kaninzi amandla kwaye ixabiso liyincinci. Ngeli xesha, ndikopishe i-Linux yonke idiski kwi-drive enkulu yamandla[...]
Phinda ufake kwakhona i-Cygwin kwi-Windows XP ngoku
Ingumendo weWanna Cry ye-virus ye-ransom type (iRansomware), kwaye yabonakala ukuba i-Windows XP isasebenza kwihlabathi. Nangona iMicrosoft ayifanele ibe yinkxaso, iMicrosoft iphinda ikhiphe iipatches. Ewe, wam[...]
Xhuma i-Yamaha NVR 500 ukuya ku-SIP umthengi we-Hikari Denwa
Ngu-N we-ofisi yase-Tokyo. Ndamazama ukuxhuma i-router ye-Yamaha "NVR 500" njengomthengi we-SIP we "Hikari Denwa router" PR - S300NE ". Umqolo "i-Hikari Denwa router" i-NTT ifake "PR-S300NE". Isandla[...]
I-VR yokulandelela indawo nge-smartphone
I-Z yeSoforo ofisi. Ukulandelwa kweendawo kuye kwazaliswa ngeefowuni ze-smartphone njengenxalenye yophando lwangaphakathi. Into endifuna ukuyenza kukubona indawo yokunyakaza njengokuhamba kwaye uyidibanise kwisikrini seVR (inyaniso). Nge-smartphone kuphela,[...]
Iimodeli zokuphucula ezingahambelani ne-Windows 10
Ngu-N we-ofisi yase-Tokyo. Isikhathi sokuphucula sikhululekile kwi-Windows 10 sihlelwe ukuba sibe ngoJulayi 29, ngoko ukuphucula kwangaphakathi kwindlu kukhula. I-Windows 10 isetyenziswe ngokulandelelana kwimishini engasetshenziswanga, kodwa i-Windows 10 ayihambisani[...]
Uxhasano lwe-DB oluhlukileyo oluhlukileyo kunye ne-FuelPHP
NguK we-Sapporo ofisi. Ngokwesiko, ukudalwa kwenkqubo yomncedisi (indawo ye-LAMP) yayigxile ekuphuhlisweni kwesakhelo sayo, kodwa kwiminyaka yamuva nje izikhokelo zendalo ezivulekileyo ziye zisetyenziswa. Isakhelo sethu asikho okubi[...]
Into ongenakuyenza ngoBumbano kwiWebGL
NguG we-ofisi yekhanda yaseTokyo. Kuye kwadlula ixesha elide ukususela kuBumbano luhambelana neWebGL, kodwa kubonakala ngathi lulwazi oluninzi lweJapan malunga neWebGL namhlanje. Namhlanje kuluhlu endawenzayo, kodwa u-Unity WebG[...]
Yenza imodeli ye-3D kwisithombe kunye ne-123D yokubamba kwaye ubonise ngobunye
Nguwe we-ofisi yeSapporo. Ndadala imifanekiso ye-3D usebenzisa i-AutoDesk 123D Catch kwaye ndazama ukubonisa ukunyakaza kunye nobunye. 123D Catch kuyinto isicelo esivumela ukuba udale idatha yefayile ye-3D kwiifoto[...]
Ikomkhulu: 〒 171 - 0022
MI Isakhiwo 3F 2-8-5 Minami Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo
ISapporo Ofisi: 〒 060-0809
I-Hokkaido Sapporo IXeko iKita-ku eNyakatho 9 - I-West 4 - i-chome 10-3 iGalleria 2 F
I-Copyright (C) 2018 Unamandla Craft Co.